स्वास्थ्य/जीवनशैली – Page5– News Of Nepal
दैनिक ३५ किलो खाना खाने राजा
बुधबार, जेष्ठ १४, २०७७ मा प्रकाशित
यो संसारमा खानाका शौखिनहरुको कुनै कमी छैन । तर हरेक दिन ३५ किलो खानेकुरा कोही मानिसले खान सक्दछ भन्ने कुरा सायद कसैलाई विश्वास लाग्ला । तर नपत्याइ कहाँ पाइन्छ र ? विश्वको इतिहासमा एकजना यस्ता राजा थिए, जसले दैनिक ३० किलो खाना खान्थे । हरेक दिन ३५ किलो खानेकुरा खाने मात्र कहाँ हो र ? ती राजाले त दिनहुँ..
शनिबार, जेष्ठ १०, २०७७ मा प्रकाशित
पानी मानव जीवनका लागि नभइ नहुने पदार्थ हो । पानीको मात्रामा बढाएमा अधिकांश रोग निर्मुल हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।अझै बिहान उठ्नेबितिकै खाली पेटमा पानी पिउनाले पेटका अधिकांश समस्याहरु आउँदैनन् ।बिहान खाली पेटमा मनतातो पानी पिउनुका फाइदाहरु निम्नानुसार छन्। आन्द्रामा फ्लस खाली पेट मा प्रशस्त..
अनुहारमा चमक ल्याउन यसो गर्नुहोस्
अनुहार चम्किलो बनाउँन मेकअप गर्ने गरिन्छ तर मेकअप गर्दैमा अनुहारमा चकम आउँदैन । पछिल्लो समय अनुहारमा भएको दाग, चाउरीपनालाई ढाकछोप गर्न, अनुहारलाई आकर्षक देखाउन मेकअप गरिन्छ । तर अनुहारलाई बिना मेकअप कसरी चम्किलो र मुलायम ? यसका लागि भने हामीले प्राकृतिक उपाय अपनाउँनुपर्छ । अनुहारमा चमक ल्याउनका..
अब ४० कटेका नेपालीले यी रोग परीक्षणमा पैसा तिर्नु पर्दैन
शुक्रबार, जेष्ठ २, २०७७ मा प्रकाशित
सरकारले ४० वर्षमाथिका नागरिकलाई ६ महिनामा एकपटक अल्बुमिन, रक्तचाप तथा ग्लुकोज परीक्षण निःशुल्क गर्ने भएको छ । शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रगतमा ग्लुकोज निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् । परीक्षण वडा तहमा रहेका..
डब्लुएचओको चेतावनी,कोरोना कहिल्यै नियन्त्रण हुँदैन
बिहिबार, जेष्ठ १, २०७७ मा प्रकाशित
एजेन्सी– विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) कहिल्यै नियन्त्रणमा आउन नसक्ने चेतावनी दिएको छ । जेनेभामा भएको एक भर्चुअल कन्फरेन्समा डब्लूएचओका आपतकालीन निर्देशक माइकल रयानले आगामी धेरै समयसम्म पनि कोरोना अन्त्य नहुने बताए । एचआईभी एड्सजस्तै..
भाइरसबाट जोगिन खानपानबारे डब्लुएचओका पाँच टिप्स
सोमवार, बैशाख २९, २०७७ मा प्रकाशित
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीको कारण अहिले धेरै कुराहरू परिवर्तन भइरहेका छन् । काम गर्ने तरिका, सरसफाइदेखि खानपानको तरिका परिवर्तन भएका कुराहरूको सूचीमा समावेश छन् । मानिसको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र विशेषगरी खानपान र स्वच्छताको मुद्दा अचानक माथि आएको छ । यसअघि यो कुरा प्राथमिकतामा थिएन भन्ने..
तीन औषधीको संमिश्रणले कोभिड–१९ का बिरामीलाई चार दिनमा नै निको बनाउने शोधकर्ताहरुको दाबी
आइतवार, बैशाख २८, २०७७ मा प्रकाशित
तीनवटा एन्टीभाइरल औषधी र एउटा इम्युन सिस्टम बुस्टर (प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउने) को संमिश्रणले कोरोनाभाइरसका संक्रमितहरुलाई चाँडो निको हुन सहयोग गर्ने हङकङका डाक्टरहरुले बताएका छन् । उनीहरुले यसलाई थप परीक्षण गर्न आवश्यक रहेको बताए पनि यो कोभिड–१९ का बिरामीका लागि उपचारको नयाँ सम्भावना हुनसक्ने..
यो अलि रमाइलो प्रसंग छ । वास्तवमा बुद्धिमान व्यक्ति कस्ता हुन्छन् ? उनीहरुको स्वभाव, प्रवृत्ति, चालचलन कस्तो हुन्छ ? के वाहिरी आवरण हेरेर कोही व्यक्ति बुद्धिमान् हुन् भनी छुट्याउन सकिन्छ ? हामी आफ्ना बालबच्चालाई हरक्षण उपदेश दिइरहेका हुन्छौं, बुद्धिमान हुनु । यसको अर्थ हरेक कुरालाई सही ढंगले बुझ्ने,..
शुक्रबार, बैशाख ५, २०७७ मा प्रकाशित
यतिबेला कोरोना भाइरसबाट जोगिन सरकारले लकडाउन गरेको छ । लकडाउनको आज २०औँ दिन । यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेमा खेलाडी र प्रशिक्षकसमेत हुन् । कुनै पनि खेलमा राम्रो नतिजा ल्याउन प्रशिक्षणमा नै बढी जोड दिनुपर्ने हुन्छ । प्रशिक्षकले खेलाडीलाई बढीभन्दा बढी अभ्यासमा संलग्न गराउनुपर्छ । यदि यस्तो हुन..
एजेन्सी : तितो स्वाद हुने तरकारीमध्ये करेलाका स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले फाइदाजनक मानिन्छ । मधुमेहको खतरादेखि लिएर विभिन्न प्रकारका समस्याहरुमा यसको सेवन गर्ने गरिन्छ । तर अत्यधिक करेला सेवन गर्दा बेफाइदा पनि पुग्छ । अत्यधिक करेला सेवनले ‘साइड इफेक्ट’ गराउँछ , करेलाको जुसमा मोमोरडिका क्यारिन्टिया..